Izixazululo - gomymobi.com
Izipesheli Izixazululo Ezinamandla
Yenza ibhizinisi lakho impumelelo & fly ephakeme !!!
gomymobi.com yakhelwe ukukusiza ukuthi wakhe amasayithi webhizinisi lakho ngokushesha, kalula nangempumelelo. Wonke amathuluzi abalulekile ukwethula ibhizinisi lakho nemikhiqizo yokudala emhlabeni.
Thola okuningi ngezansi kwezinto ezinamandla ongazisebenzisa ukuklama nokuphatha ukuba khona kwakho ku-inthanethi.
noma Qalisa Manje
Ake sethule igama lakho lomkhiqizo nemikhiqizo emihle kakhulu yokudala kuwo wonke umuntu emhlabeni nomakhi wakho wesitolo se-eCommerce. Sikusiza ukuthi udale izitolo ezingenamkhawulo, ukuthengisa imikhiqizo engenamkhawulo; ngaphandle kwemali yokuthengiselana, akukho mali yokuqasha; uzothola u-100% wokukhokha ngalokho okuthengisayo.
Vula Isitolo & Thengisa
Amakhasimende Wethu Awesome Athande Izixazululo Ezimangalisa
Umgomo wethu wokuqala ugxile ekwenzeni amakhasimende ethu ajabule. Yebo, nansi indlela esisebenzela ngayo ibhizinisi lakho, futhi.
Izisombululo ze-Advance Business
Isihleli sekhodi yangokwezifiso
Okubhaliselwe nezimpahla ezibonakalayo
Qala ukwakha amawebhusayithi wakho webhizinisi kusukela ekuqaleni noma ukhethe kumathempulethi amaningi enziwe ngabakhiqizi. Ngomakhi wewebhusayithi wokuhudula uphonsa kakhulu emhlabeni, ungakha futhi uthuthukise noma iyiphi iwebhusayithi oyidingayo noma oyifunayo.
Zama i-Element Builder MAHHALA
Namathisela ingqalasizinda yebhizinisi ecebile kunoma iyiphi indawo. Zonke izixazululo ze-eCommerce, zokusakaza nezobulungu zigcinwa ngokugcwele futhi ziza nokuziphatha okwakhelwe ngaphakathi kokuphendula.
Yakha izinhlelo zewebhu ezithuthukile usebenzisa umhleli wekhodi yangokwezifiso ukwengeza noma ukuhlela noma yini oyifisayo. Phatha konke okuqukethwe okusindayo ekusithekeni bese ukuveza kahle kuzakhiwo eziphindayo eziphindayo.
Thengisa okubhaliselwe nganoma yiliphi igama, ubulungu namaphakeji wezinsizakalo, izimpahla ezibonakalayo, okuqukethwe, imiphakathi kanye nesoftware. Nikeza izinkokhelo eziphindaphindayo noma zesikhathi esisodwa ngezinhlobo eziningi zezikhathi zesilingo usebenzisa abahlinzeki bokukhokha abahlukahlukene abahlukahlukene.
MAHHALA ngewebhusayithi yakho yebhizinisi
gomymobi.com iyajabula ukukusiza ukuthi wakhe isayithi lakho lokuqala lebhizinisi, futhi ulisingathe MAHHALA empilweni yakho yonke.
Ukubhalisa kulula kakhulu futhi kuyashesha, akudingeki ikhadi lesikweletu; futhi i-akhawunti yakho yamahhala newebhusayithi yebhizinisi ihlala nathi kuze kube phakade.
Vula izitolo ezingenamkhawulo
Uma udinga ukuvula izitolo ze-inthanethi ezingenamkhawulo ukuthengisa imikhiqizo eminingi ehlukahlukene, ungakwenza konke kalula.
Thengisa imikhiqizo ehlukahlukene
Ngeplatifomu yethu ye-eCommerce, uyakwazi ukuthengisa imikhiqizo eyidijithali neyomzimba, futhi nokubhaliselwe esitolo esisodwa kalula.
Igama Lesizinda Ngokwezifiso
Uma usuvele unesizinda futhi ufuna ukusisebenzisela iwebhusayithi eyakhiwe, kudingeka kuphela ukwabela lesi sizinda bese usebenzisa iwebhusayithi yakho yebhizinisi ngalesi sizinda sangokwezifiso. Isayithi lebhizinisi lakho libukeka linobuchwepheshe obuningi ngesizinda sangokwezifiso.
Uma une-host yangasese futhi ufuna ukusingatha iwebhusayithi yakho eyakhiwe, sinethuluzi elilula ukukusiza ukuthi ulayishe wonke amafayela wewebhusayithi kumsingathi wakho ngokuchofoza okukodwa. Noma ungalanda lonke isayithi endaweni.
Isizinda esingaphansi kwesinye nesinye isiza
Ukwazi ukushicilela nokugcina umlando webhizinisi lakho ngokuchofoza okungu-1 kuphela.
Okubhaliselwe okungabizi futhi okuguquguqukayo
Uma usenelisekile ngezixazululo zethu, sinikezela ngokubhaliselwe okuningi okufanelekile ukuthuthukisa i-akhawunti yakho ukuze uthole izici ezinamandla amakhulu.
Thola ngokuthengisa ilayisensi yetimu
Uyakwazi ukuthola imali nathi, ngokuthengisa amalayisense wetimu yakho kwabanye abasebenzisi. Uzothola yonke imali, asikhokhisi mali.
Indawo Yemakethe yeWebhusayithi
gomymobi.com futhi iyindawo yabo bonke abasebenzisi yokuthengisa izingqikithi zabo eziyizintandokazi, abadali banganikela ngesihloko mahhala noma bathengisele amalayisense ama-2: ngokudalwa ngakunye noma ngempilo yonke.
Ngokusobala, abadali bangafaka eyabo ikhodi yokukhangisa (noma ipulatifomu) ezingqikithini zabo uma bengathanda ukubanika mahhala.
Amawebhusayithi namakhasi angenamkhawulo
Ungakha amawebhusayithi angenamkhawulo futhi kuwebhusayithi ngayinye futhi udale amakhasi wewebhu angenamkhawulo.
I-tracker eyakhelwe ngaphakathi
Sine-tracker eyakhelwe ngaphakathi eyokusiza ukubala ukuvakashelwa nokubukwa kwamakhasi, lezi zibalo zingalandelelwa usuku nosuku.
Impela, ungafaka enye ipulatifomu yakho ye-tracker, efana ne-Google Analytics kalula futhi ngokushesha.
Amasayithi nezindikimba eziphendula ngokugcwele
Zonke izingqikithi namasayithi aphendula ngokuphelele futhi anobungani beselula, enzelwe ukusebenza kunoma yiziphi izinqumo zesikrini sanoma yiziphi iziphequluli zesimanje.
Futhi okubaluleke kakhulu, iPhaneli Yokulawula ne-User Interface nazo ziphendula ngokuphelele, abasebenzisi bangaphatha futhi benze amasayithi ngaso sonke isikhathi noma kuphi.
Uhlelo lwethu lwenzelwe ukunikeza amawebhusayithi wakho nokugcina isivinini nokusebenza okuhle kakhulu.
Khetha izingqikithi zesayithi ezingaphezu kwezingu-95 zebhizinisi ngalinye ongathanda ukuzisungula.
Ingqikithi Yenkululeko Yokwakhiwa
Yakha futhi uthuthukise isayithi lakho ngendlela oyifunayo ngokuhudula nokudonsa kwethu okusha.
Thuthukisa Isiphequluli Semidiya
Khombisa izithombe zakho, amavidiyo noma yikuphi okokusebenza kwe-multimedia ngesakhiwo esihle segalari ngesiphequluli sethu esinamandla semidiya.
Yethula futhi uthengise izimpahla zakho zedijithali noma zomzimba nezinsizakalo noma ibhizinisi esitolo esihle se-inthanethi.
Isitolo nomphathi womkhiqizo
Landelela wonke ama-oda futhi uphathe uhlu lwakho kusuka kunoma iziphi izinqumo: ideskithophu, ikhompyutha ephathekayo, ithebhulethi noma iselula.
Izindlela Zokukhokha Eziningi
Nikeza isixazululo sokukhokha esithembekile esenza ukuthengiselana oku-inthanethi kube lula futhi kuphephe kuwe nakumakhasimende akho. Yamukela amakhadi esikweletu, i-PayPal, i-Stripe, i-Authorize.net, izinkokhelo ezingaxhunyiwe ku-inthanethi nokuningi - ikhomishini mahhala ngokuphelele.
Thuthukisa ukuthengisa ngaphambili kwesitolo ngokunikela ngezaphulelo zonyaka nokuthunyelwa kwamahhala kuma-oda emicimbi ekhethekile.
Sivumele ukuthi sikhulise ibhizinisi lakho futhi silenze liphakame liye phezulu !!!
Yakha iwebhusayithi yakho nezitolo MANJE